Famaritana sy Chemistry Ceramique
Fantaro hoe inona ny Keramika ao amin'ny Chemistry
Ny teny hoe "keramika" dia avy amin'ny teny grika hoe "keramikos", izay midika hoe "vita amin'ny vilany". Raha toa ny keramika voalohany indrindra dia ny vilany, ny endriny dia mirakitra vondron'olona marobe, ao anatin'izany ireo singa madio. Ny keramika dia fiorenana tsy ara - dalàna , tsy metomety, izay miorina amin'ny oxid, nitride, boride, na carbide, izay voalefaka amin'ny hafanana ambony. Ny Keramika dia azo aforitra alohan'ny hamonoana hamokarana loko iray izay mampihena ny porosity ary misy loko sy marevaka matetika.
Maro ny ceramika ahitana fifangaroan'ny fifandraisana ionika sy covalente eo anelanelan'ny atôma. Ny fitaovana enti-miasa dia mety ho kristaly, semi-kristaly, na glasy. Ny fitaovana amorphous miaraka amin'ny fitambarana mitovy dia antsoina hoe " fitaratra ".
Ny karazana efatra lehibe indrindra amin'ny seramika dia akora, keramika, rafitra ara-teknika, ary refractories. Ny Whitewares dia ahitana cookie, potika, ary rindrina. Ny keramika misy ny rafitra dia ahitana biriky, fantsom-batana, takelaka tafo ary planina. Ny keramika ara-teknika dia fantatra ihany koa amin'ny seramika manokana, tsara, mandroso na energetic. Ity kilasy ity dia ahitana angona, tavy manokana (toy ny fiarovana ny hafanana), fitaovana biomedical, seraseram-barotra, angovo nokleary, seramika seramika, ary fametahana seramika. Ny refractories dia seramika ampiasaina mba hamonoana taza-masomboly, fantson-dradradradra, ary fafana amin'ny hafanana amin'ny kamiao.
Ahoana no anaovana ny Keramika
Ny fitaovam-pitaovana ho an'ny keramika dia misy tanimanga, kaolinate, oksida aluminium, carbide silisiana, carbide tungsten, ary singa madio.
Ny fitaovam-piasana dia mifamatotra amin'ny rano mba hamolavolana vovon-javatra iray izay mety hanova na hamolavola azy. Ny sarimihetsika dia sarotra ny miasa rehefa vita izy ireo, ka matetika izy ireo no mamolavola ny endriny farany. Afaka avela ho maina ny endriny ary arotsaka ao anaty lafaoro antsoina hoe kilao. Ny dingam-pamokarana dia manome ny angovo mba hamolavolana fatorana vaovao amin'ny fitaovana (fanangonana) ary indraindray mineraly vaovao (ohatra ny mullite forms avy amin'ny kaolin amin'ny famoahana ny pentle.)
Mety misy tafo gorodona matevina, miloko marevaka na ampiasaina, alohan'ny hamonoana voalohany na mety mitifitra (maromaro kokoa). Ny famonoana voalohany ny ceramic dia manome vokatra iray antsoina hoe bisque . Ny afo voalohany dia mandoro ny organika sy ny loto hafa. Ny famonoana faharoa (na fahatelo) dia azo antsoina hoe vera .
Ohatra sy fampiasa amin'ny Keramika
Tabilao, biriky, tapa-tavoahangy, tanimanga, kina, ary pentlene dia ohatra mahazatra amin'ny seramika. Ireo fitaovana ireo dia fantatra tsara amin'ny fampiasana amin'ny fananganana, famoronana ary ny zavakanto. Misy fitaovana hafa vita amin'ny seramika:
Taloha, ny glasa dia heverina ho ceramika, satria fikambanana tsy ara-dalàna izay entina sy entina toy ny ceramic. Na izany aza, satria ny vera dia amorphous solid, ny glas dia heverina ho fitaovana manokana. Ny rafitra anatiny rafi-pandrefesana amin'ny seramika dia mitana andraikitra goavana amin'ny fananana azy ireo.
Azo ampiasaina ho keramika ny silicone madio sy karbônina madio. Amin'ny heviny henjana, dia azo antsoina hoe seramika ny diamondra iray.
Ny karbady karbidika sy carbide tungsten dia keramika ara-teknika izay manamafy ny fanoheran'ny herisetra, mahatonga azy ireo ho ilaina amin'ny fitaovam-piadiana, mitazona takelaka ho an'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ary fitaovana fametrahana fitaovana.
Ny oxane uranium (UO 2 dia keramika ampiasain'ny gazy mpamokatra nokleary.
Zirconia (dioxide zirconium) dia ampiasaina mba hanaovana kofehy vita amin'ny keramika, metaly, solika fitrandrahana, ary solosaina oksizenina.
Zinc oxide (ZnO) dia semiconductor.
Ny oksidina boronina dia ampiasaina mba hanao fitaovam-piadiana.
Bismuth strontium oxide sy magnesium diboride (MgB 2 ) dia supraleiter.
Ny Steatite (magnesium silicate) dia ampiasaina ho solon-tsambo.
Ny titanant Barium dia ampiasaina mba hanamboarana singa fanafody, kapila, mpanodina, ary singa fitahirizana rakitra.
Ny artifacts seramika dia mahasoa ao amin'ny arkeolojia sy paleontôlôzia satria ny firafitry ny simika dia azo ampiasaina hamantarana ny fiaviany. Anisan'izany ny tsy fisian'ny tanimanga, fa ny fanetren-tena ihany koa - ireo fitaovana nampidirina nandritra ny famokarana sy ny famonoana.
Ny keramika dia ahitana karazan-javatra isan-karazany izay sarotra ny manambatra ny toetrany.
Ny ankamaroan'ny keramika dia maneho ireto toetra manaraka ireto:
Matetika, arakaraka ny hamafin'ny tsy fahasalamana
Toe-tsehatra mahaleotena sy fitaratra
Hery herim-po mahery
Ny fangaraharana optique amin'ny andiam-pahazavana
Anisan'izany ny fanatsarana sy ny plastika piezoelectric.
Ny siansa momba ny fanomanana sy ny famaritana ny keramika dia antsoina hoe ceramography .
Ny fitaovam-pitaovana dia misy kilasy iray mihoatra ny iray, izay mety ahitana seramika. Ohatra amin'ny composites dia ny fibarosoka sy ny fiberglass. Ny cermet dia endrika karazana firaiketam-po misy metaly sy metaly.
Ny famokarana angovo vita amin'ny gliôzy dia singa tsy vita printy miaraka amin'ny firavaka seramika. Raha toa ny milina ceramika kristiana dia miezaka ny hamolavola azy, ny glasa-keramika dia miorina amin'ny fanariana na famonoana fery. Ohatra avy amin'ny glasy-keramika ny sehatra "glasa" ary ny fitambaran'ny glasy nampiasaina hamatahana ny fako nokleary ho an'ny fanodinana.
Afaka misotro toaka ve ianao?
Fampahalalana momba ny asidra
Fitsipika momba ny fandrefesana sy fitsipika
Ny fanontaniana momba ny fanadihadiana ara-toekarena sy ara-tsosialy
Tsy misy ny Fanjakana maimaim-poana na mora
Ireo Top 20 Jokes ao amin'ny Donak'afo Tranok'alan'i Donald Trump
Review: Timex Ironman Run Trainer Jereo ny GPS sy Heart Rate Monitor
Fianarana ho an'ny fanjakana - Pennsylvania
Tattoo Inks - Ny Zavatra tsy Fantatrao Mety Mandreraka Anao
Ny Jeografia sy ny Fifindra-monina nandritra ny vanim-potoana maizin'ny Grika fahiny
Ny toe-javatra ankehitriny any Moyen Orient
Ny antony mahatonga ny fiaramanidina tsy misy idiran'ny fiaramanidina ho ambony
Fampidirana ny Fivavahana Jedi (Jediism) ho an'ny mpangataka
Lighting Design an'ny Monument Washginton
Ireo tsy mino an'Andriamanitra sy ny fanalàn-jaza: fomba fijery tsy manam-petra momba ny fitondran-tena
15 Ny olona izay manana ny andro ratsy indrindra
Fivarotana ivory any Afrika
Tantaran'ny Hula Hoop
Manoritsoritra ireo fampiasana: Raha, Raha, rehefa hatramin'ny ela
Ahoana ny fomba famerenana an-tsokosoko ny sary hosodoko vita vita
Tokony hampiasa mpisolovava momba ny fifindra-monina ve ianao?
Gymnastics olympika: Fomban'ny gymnastics an'ny vehivavy sy ny fitsarana
Ny Komity Komity Kongresy
Andramo ireto volon'gola vaovao ireto